ebooks - yeyintcanada2
>> 1. အနာဂတ်မျက်လုံးရှင်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/aungkant-anargat_myat-lone-shin.pdf>(အောင်ခန်.)
>> 2. ကာလီဒေ၀ီ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/aungkantkarlidaywi.pdf>(အောင်
>> 3. လက်သုံးတော်ဓါး<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/aungkantlat-tone-taw-dar.pdf>(အောင်ခန်.)
>> 4. နေဘုရားတော်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/aungkantnay-min-ei-tar-taw.pdf>(အောင်ခန်.)
>> 5. အမွေ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/aung-thin-amwe.pdf>အောင်သင်း
>> 6. သေကိန်းဆိုက်တဲ့ညနှင့်အခြားဝတ္တုတိုများ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/aungthintay_kein_site_tae.pdf>အောင်သင်း
>> 7. ဥာဏ်ပညာ ထက်မြက်သူတို.လက်စွဲ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/art-of-war.pdf>ချစ်နိုင် (စိတ်ပညာ)
>> 8. အနှစ်၃၀<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/chit-naing-30-years.pdf>ချစ်နိုင် (စိတ်ပညာ)
>> 9. သိပ္ပံမှသည် သစ္စာဆီသို.<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/chit-nge-thatepanmha.pdf>(ချစ်ငယ်)
>> 10. မဟာသေနာပတိ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/chit-oo-nyo-ma-har-tay-nar-pa-ti.pdf>(ချစ်ဦးညို)
>> 11. လင်္ကာဒီပချစ်သူ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/chitoonyo-lin-gar-di-pa-lover.pdf>(ချစ်ဦးညို)
>> 12. တွေးသူများ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/ko-tar-thinkers.pdf>(ကိုတာ)
>> 13. ငယ်ကချစ်အနှစ်တစ်ရာ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00013.pdf>(ဒဂုန်ရွှေမျှား)
>> 14. စောရသက်ပြင်း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00014.pdf>(ဒဂုန်ရွှေမျှား)
>> 15. ညမဖတ်ရ (သို.မဟုတ်) သွေးစုပ်ရောဂါ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00015.pdf>(ဒဂုန်ရွှေမျှား)
>> 16. စိတ်ပြောင်းကိုခွာ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/0001601.pdf>(ဒဂုန်ရွှေမျှား)
>> 17. ထမင်းလုံး တစ္ဆေ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/0001602.pdf>(ဒဂုန်ရွှေမျှား)
>> 18. ဂြိုလ်မွေတဲ့ပန်းတဂေါင်း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/0001603.pdf>(ဒဂုန်ရွှေမျှား)
>> 19. ၀ိညာဉ်၏ အရိပ်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/0001604.pdf>(ဒဂုန်ရွှေမျှား)
>> 20. သင်္ဘောပျက် ခရီးသည် ခုနှစ်ယောက်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/0001605.pdf>(ဒဂုန်ရွှေမျှား)
>> 21. လက်မတင်ကလေး<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/0001606.pdf>(ဒဂုန်ရွှေမျှား)
>> 22. သူယောင်ရုပ်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/0001607.pdf>(ဒဂုန်ရွှေမျှား)
>> 23. ကမ္ဘာကို ကိုင်လှုပ်သူ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00017.pdf>(ဒဂုန်ရွှေမျှား)
>> 24. ငယ်ကချစ် အနှစ်တစ်ရာ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00018.pdf>(ဒဂုန်ရွှေမျှား)
>> 25. ရှက်ပြုံး <http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00023.pdf>(ချစ်စံဝင်း)
>> 26. မျက်ရည်စများနှင့်ရယ်သံ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00024.pdf>(ကျော်လှိုင်ဦး)
>> 27. ရဲဘော်သုံးကျိပ်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00025.pdf>(ကျော်ငြိမ်း)
>> 28. တော်ဖလာနှင့်စကားစမြည်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00026.pdf>(ကျော်ဝင်း)
>> 29. တော <http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00027.pdf>(လင်းဝေမြိုင်)
>> 30. မာန၏နောက်ဆွဲတွဲများ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00028.pdf>(လွန်ထားထား)
>> 31. စာဖတ်ကျွမ်းခြင်းဖြင့် ဘ၀တိုးတက်ရေး ၁<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00029.pdf>(ဇင်သန်.)
>> 32. စာဖတ်ကျွမ်းခြင်းဖြင့် ဘ၀တိုးတက်ရေး ၂<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00030.pdf>(ဇင်သန်.)
>> 33. စာဖတ်ကျွမ်းခြင်းဖြင့် ဘ၀တိုးတက်ရေး ၃<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00031.pdf>(ဇင်သန်.)
>> 34. ဆင်းရဲသောဖေဖေ ချမ်းသာသောဖေဖေ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00033.pdf>(ညီသစ်)
>> 35. သူတို.အမြင်သူတို.အတွေး<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00034.pdf>(ပါရဂူ)
>> 36. ကလေးပြဿနာ <http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00035.pdf>(ပါရဂူ)
>> 37. သူ.လိုဘုရင် <http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00036.pdf>(ပါရဂူ)
>> 38. လူသုံးကုန်ပစ္စည်းရောင်းသူများ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00037.pdf>(ဖေမြင့်)
>> 39. သေရွာပြန်တို.၏အဏ္ဏ၀ါခရီး<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00038.pdf>(ဖိုးကျော.)
>> 40. ဆင်သင်္ချိုင်းရှာပုံတော်နှင့်အခြားဝတ္တုတိုများ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00039.pdf>(ဖိုးကျော.)
>> 41. ပင်လယ်ကျား၊အဏ္ဏ၀ါမီးစုန်းများနှင့်အခြားဝတ္တုတိုများ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00040.pdf>(ဖိုးကျော.)
>> 42. ညီမလေးရယ်စိုးရိမ်မိတယ်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00042.pdf>(တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင်)
>> 43. တန်းခူးလေနှင့်လျော့တော့သည်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00043.pdf>(တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင်)
>> 44. ၀သန်လေချိန်မှန်ကူး<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00044.pdf>(တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင်)
>> 45. ခေါင်းနှင့်ပန်း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00045.pdf>(ဖိုးဝမောင်)
>> 46. အေးချမ်းစေသော စကားလုံးလေးများ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/00046.pdf>(ဖိုးဝမောင်)
>> 47. ဖြစ်တည်ခြင်း ပဓါန၀ါဒနှင့် လူသားပဓါန၀ါဒ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/san-lwin-humanism.pdf>(ဆန်းလွင်)
>> 48. ကမ္ဘာ.တွေးခေါ်ပညာရှင်ကြီးများ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/san-lwin-world-philosophers.pdf>(ဆန်းလွင်)
>> 49. အချစ် လက္ခဏာ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/san-zar-ne-bo-love-signs.pdf>(စံ-ဇာဏီဘို)
>> 50. အချစ် ဗေဒင်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/san-zar-ne-bo-love-talk.pdf>(စံ-ဇာဏီဘို)
>> 51. မီးပြတိုက်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/saungwinlatmi-pya-tite.pdf>(ဆောင်းဝင်းလတ်)
>> 52. နံနက် ၃နာရီ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/saungwinlatmorning3hour.pdf>(ဆောင်းဝင်းလတ်)
>> 53. ဆူးကလေးစူးတယ် ခူးမယ်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/saungwinlatsulay-sutal-kumal.pdf>(ဆောင်းဝင်းလတ်)
>> 54. အမှတ်တရရွှေ ၆၀<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/240-win-nyine-2.pdf>(၀င်းငြိမ်း)
>> 55. အဖော်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/shar-accompany.pdf>(ရှား)
>> 56. တသက်တာမှတ်တမ်းနှင့်အတွေးခေါ်များ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/shwe-oo-daung.pdf>(ရွှေဥဒေါင်း)
>> 57. မြတ်သက်မော်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/shwe-oo-daung-myat.pdf>(ရွှေဥဒေါင်း)
>> 58. ခေါင်းတုံးပေါ်ထိပ်ကွက<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/shwe-oo-daung-thu_taw_sein_2.pdf>
>> 59. ရတနာပုံ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/shwe-oo-daung-yadanarbon.pdf>(ရွှေဥဒေါင်း)
>> 60. ခရီးထွက်ရန်စီစဉ်ကြခြင်း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/so-la-mon-thite28-shwe-oo-daung29.pdf>(ရွှေဥဒေါင်း)
>> 61. အနားသတ်သစ္စာ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/soe-myat-thuzar-thitsar.pdf>(စိုးမြတ်သူဇာ)
>> 62. ဘ၀တစ်ခုအမှတ်တရ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/swe-mindanuphyu-memorial-of-life.pdf>(ဆွေမင်း၊ ဓနုဖြူ)
>> 63. လူညာကြီး<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/swesweaglunyarkyi.pdf>(ဆွေဆွေအောင်)
>> 64. လွယ်အိပ်ကလေး<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/swesweaglweatekalay.pdf>(ဆွေဆွေအောင်)
>> 65. အရှေ.မြို.ရိုးမှ မိုးရေစက်များ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/a-shay-myo-yoe-taryar-min-wai.pdf>(တာရာမင်းဝေ)
>> 66. မှော်ဆရာရဲ.ကျောင်းစာအုပ်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/magic.pdf>(တာရာမင်းဝေ)
>> 67. ကောင်းကင်အကြွေကောက်တဲ့လက်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/sky.pdf>(တာရာမင်းဝေ)
>> 68. ရွှေဖိနပ်မှာအစိမ်းရောင်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/taryar-minwai-the-girl-who-wear-golden-shoe-with-green-cross.pdf>(တာရာမင်းဝေ)
>> 69. ကိုယ့်လက်နဲ. ဖမ်းမိတဲ့နဂါးငွေ.တန်း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/taryar-minway-milkyway.pdf>(တာရာမင်းဝေ)
>> 70. ကိုးမရှိတဲ့ န၀င်း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/taryar-minway-none9na-win.pdf>
>> 71. အထဲသို.၀င်လော့ ဘာကြောင့်ရပ်နေသနည်း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/taryarthinnaenannatkin.pdf>(တာရာမင်းဝေ)
>> 72. ကျွန်တော်နှင့်ကြယ်မြင်လမြင်လောကဓံ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/taryarminwaikyaemyinlamyin.pdf>(တာရာမင်းဝေ)
>> 73. ပြိုင်မြင်းတို.ရဲ့ခွာသံ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/taryarminwaipyin-myin-tot-yae-khwar-than.pdf>(တာရာမင်းဝေ)
>> 74. ကျွန်တော်နှင့်ဧဒင်ကချေသည်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/taryarminwaya_dain_ka_chay_tal.pdf>(တာရာမင်းဝေ)
>> 75. ကျွန်တော်နှင့်ကြေးသွန်းယဉ်ကျေးမှု<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/taryarminwaykyon_taw_nae_kyay_ton.pdf>(တာရာမင်းဝေ)
>> 76. လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ ကျောက်ထွင်းရာဇ၀င်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/taryarminwaylu-nge.pdf>
>> 77. ချစ်သုံးလီ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/than-swe-triple-eighti.pdf>(သန်းဆွေ)
>> 78. ကျွန်တော့်ဘ၀အကြောင်း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/thaw-dar-swe1-to-11.pdf>(သော်တာဆွေ)
>> 79. ဘရန်ဒီတစ်ပုလင်း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/thawdaswe.pdf>(သော်တာဆွေ)
>> 80. ကျောက်ဖြုံးကျော်ကြီး<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/thawtarswe.pdf>(သော်တာဆွေ)
>> 81. အရှေ.ကနေ၀န်းထွက်သည့်ပမာ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/thein-phay-myint-a-shay-ka-nay-wun-htwat-the-pa-mar-2.pdf>(သိန်းဖေမြင့်)
>> 82. မျိုးရိုးထဲမှ ဆိုးပေကြီးများ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/thu-maung-black-sheeps-from-relatives.pdf>(သုမောင်)
>> 83. အစွမ်းထက်ဂါထာတော်များနှင့်ဂမ္ဘီရဖြစ်ရပ်ဆန်းများ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/thu-thu-kha-aswan-htet-taw-win-gar-thar-taw-myar.pdf>(သုသုက)
>> 84. သုခ မှတ်စု<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/39-thukhathu_kha_matsu.pdf>
>> 85. ငလျင်ဗုံးကြဲခဲ့စဉ်ကနှင့်အခြားဝတ္တုတိုများ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/laythuyaenga_lwin_bome_kyal.pdf>(ဦးလှဝင်း)
>> 86. ရွှေဘုံသာ လမ်းပေါ်မှာ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/laytuyaeshwe_bone_tar_lan.pdf>(ဦးလှဝင်း)
>> 87. အာဇာနည်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/r-zar-niu-nu.pdf>(ဦးနု)
>> 88. တာတေ စနေသား<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/u-nu-tartay-sanay-thar.pdf>(ဦးနု)
>> 89. ဘ၀အကျဉ်းသား<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/u-shwe-aung-life-prisoner.pdf>(ဦးရွှေအောင်)
>> 90. ၁၉၈၈-၂၀၀၂ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ထူးခြားမှုရက်စွဲမှတ်တမ်းများ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/87-and-2002.pdf>
>> 91. HIV မှတ်စုများ ၂၀၀၄<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/dr-thiha-hiv-hmatsumyar.pdf>(ဒေါက်တာသီဟ)
>> 92. ငါပြောချင်သမျှငါ့ကြောင်း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/drthantun-autobiography.pdf>(ဒေါက်တာသန်းထွန်း)
>> 93. ကဗျာများ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/general-aung-san-poems.pdf>
>> (ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း) *****
>> 94. ယောနသံ ဇင်ယော်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/jonathan-livingstone-seagull.pdf>(ဦးဘသန်း)
>> 95. မှတ်မိသမျှ ကိုအောင်ဆန်း၏ကျောင်းသားဘ၀<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/ko-aung-san-thakhin-kyaw-sein.pdf>
>> 96. ကိုဒေါင်း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/ko-down-mg-htin.pdf>(မောင်ထင်)
>> 97. ရေဘုရင်မြေပြင်မှာတော့<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/kyi-thar-_-yay-ba-yin.pdf>(ကြည်သာ)
>> 98. သွေး <http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mamalayblood.pdf>(ဂျာနယ်ကျော် မမလေး)
>> 99. ဂျုလိယက်ဆီဆာ<http://shweone.wordpress.com/wp-admin/post.php?action=edit&post=6http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mantinjuleeyatseesar.pdf>(မန်းတင်)
>> 100. ရှေးဘ၀ နောက်ဘ၀ ဗုဒ္ဓ မဝေဖန် နှင့် ဓမ္မစာစုများ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/win-thein-oo-future-life-and-past-life.pdf>(၀င်းသိန်းဦး)
>> 101. ငှက်တွေ ဆောင်းမခိုမီ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/winter.pdf>(ငြိမ်းအေးအိမ်)
>> 102. မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ (၁) အပိုင်း က<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/swe-sone-kyann-1-pine-ka.pdf>(ဦးနု)
>> 103. မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ (၁) အပိုင်း ခ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/swe-son-kyann-1a.pdf>(ဦးနု)
>> 104. အဟိတ်- - - ၀တ္တုဇာတ်လမ်းများ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/theik-pen-mg-wa.pdf>(သိပ္ပံမောင်ဝ)
>> 105. ရတနာ လိုဏ်ဂူ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/natnweya-ta-nar_lhaunggu.pdf>(နတ်နွယ်)
>> 106. အတွေးအမြင်စာစဉ်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/thinking-oct-2005.pdf>
>> 107. ပန်းတစ်ပွင့်ရဲ. ရင်ခုံသံ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/win-win-myint-pantapwintyae-27yinkhonethan.pdf>(၀င်းဝင်းမြင့်)
>> 108. ဗေဒါလမ်း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/bay-dar-lan-zaw-gyi.pdf>(ဇော်ဂျီ)
>> 109. ဝေေ၀ရီရီ ၀တ္တု<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/zaw-zaw-aung-way-way-yeye.pdf>(ဇော်ဇော်အောင်)
>> 110. မြိုင်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/dagon-taryar-myaing.pdf>(ဒဂုန်တာရာ)
>> 111. စက်ဝိုင်း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/ma-san-da-cycle.pdf>(မစန္ဒာ)
>> 112. ငယ်သူမို.မသိပါ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/ma-sanda-nge-thu-mhoe-ma-thi-par.pdf>(မစန္ဒာ)
>> 113. ငြိုးမာန်ဖွဲ့သူရယ်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/ma-sanda-nhyo-marn-phwe-thu-yel.pdf>(မစန္ဒာ)
>> 114. ဂျီဟောသူ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/ma-sanda-g-hall-girl-198.pdf>(မစန္ဒာ)
>> 115. အရိပ်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/ma-sandar-a-yiek.pdf>(မစန္ဒာ)
>> 116. ၀တ္တုတိုများ ၆<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/masandarmagzinenovel_6.pdf>(မစန္ဒာ)
>> 117. ပုစ္ဆာ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/masnadar_problem.pdf>(မစန္ဒာ)
>> 118. မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ကျင့်ဝတ်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/maung-maung-ent-myanmar-heritage.pdf>(မောင်အံ့)
>> 119. ပစပ်ရာဇ၀င်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mawbi-sayar-thein-talk-history.pdf>(မှော်ပီဆရာသိန်းကြီး)
>> 120. ကိုဒေါင်း (မောင်ထင်)<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mg_htin_s-ko_dang.pdf>
>> 121. မြန်မာ၁၂လအကြောင်း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mg-htin2812-month29.pdf>(မောင်ထင်)
>> 122. ဟာသများလက်ရွေးစင်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mg-kaung-htike-01.pdf>(မောင်ကောင်းထိုက်)
>> 123. ဟာသများလက်ရွေးစင် ၂<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mg-kaung-htike-02.pdf>(မောင်ကောင်းထိုက်)
>> 124. ဟာသများလက်ရွေးစင် ၁၄<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mg-kaung-htike-14.pdf>(မောင်ကောင်းထိုက်)
>> 125. သေပြေးရှင်ပြေး<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mg-paw-tun-the-piegon-project.pdf>(မောင်ပေါ်ထွန်း)
>> 126. ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းခေတ် အိုင်ဒီယာစီးပွားရေး<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mg-susan-global.pdf>(မောင်စူးစမ်း)
>> 127. ထူးအတွေ.ကြုံအဆန်း တစ္ဆေဇာတ်လမ်းများ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/dr-aung-kyaw-htoo_atwe_akyone_san.pdf>(ဒေါက်တာအောင်ကျော်)
>> 128. တွေ.ရကြုံရ ရှတတလေးတွေ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/eikyarkwe-tweyakyoneyashatatlaytwe1.pdf>(အီကြာကွေး)
>> 129. မီးရောင်အောက်ကိုဝင်လျှင်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/me-yaung-moe-moe-inya.pdf>(မိုးမိုး အင်းလျား)
>> 130. ဖြတ်သန်းသွားလာခွင့်မရှိ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/moe-ni-lwin-restrict.pdf>(မိုးနီလွင်)
>> 131. ပေတလူ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/min-thein-kha-pay-ta-lu.pdf>(မင်းသိင်္ခ)
>> 132. ၀တ္တုတိုပေါင်းချုပ်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/min-thein-kha-short-stories-3.pdf>(မင်းသိင်္ခ)
>> 133. ဆားလင်းနှင်းမောင်နှင့် ဘမျိုးဘိုးတူ ဘယ်သန်ဘမှန် ပထမပိုင်း<http://shweone.wordpress.com/wp-admin/post.php?action=edit&post=6http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mintheinkhabamyo-boe-thu.pdf>(မင်းသိင်္ခ)
>> 134. ဆားလင်းနှင်းမောင်နှင့် ဘမျိုးဘိုးတူ ဘယ်သန်ဘမှန် ဇာတ်သိမ်း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mintheinkhabae-than-ba-mhan2.pdf>(မင်းသိင်္ခ)
>> 135. မ" တတ်ပါ့"<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mintheinkhama_tat_pa.pdf>(မင်းသိင်္ခ)
>> 136. မအောင်ရင်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mintheinkhama-aung-yin0.pdf>(မင်းသိင်္ခ)
>> 137. မနောမယကိုပီတာ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mintheinkhamanaw-ma-ya-ko-pi-tar.pdf>(မင်းသိင်္ခ)
>> 138. ဖရန်.(ဇ)ကာ(ဖ)ကာ၏ စာ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/myint-than-word.pdf>(မြင့်သန်း)
>> 139. ပြောရင်းပြောနေမည့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/nanda-theinzan-pyawchinthamya.pdf>(နန္ဒာသိန်းဇံ)
>> 140. အိုင်ဒီယာ အက်ဆေးများ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/21-naywinmyintidea_essaymyar.pdf>(နေ၀င်းမြင့်)
>> 141. နှလုံးသားထဲကြွက်ဝင်နေသည်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/heart.pdf>(နီကိုရဲ)
>> 142. ကျွန်တော်နှင့်လက်တွဲဖေါ်များ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/ni-ko-ye-me-with-friends.pdf>(နီကိုရဲ)
>> 143. ကျွန်တော်နှင့်ဈေးသည်အလွဲများ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/ni_ko_ye_kyaw_taw_ne_zay_the_399.pdf>(နီကိုရဲ)
>> 144. တစ်သုံးခုနှစ်ရှစ်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/nikoye-1-3-7-8.pdf>(နီကိုရဲ)
>> 145. လှည့်စား<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/nikoye-hlae-sar.pdf>(နီကိုရဲ)
>> 146. သံစုံကြူးတဲ့ည<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/nikoye-tansonekyutapnya.pdf>(နီကိုရဲ)
>> 147. လွယ်အိတ်ထဲကအလွဲများ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/nikoye-bag.pdf>(နီကိုရဲ)
>> 148. နတ်ဆိုးတစ်ကောင်နဲ.ရင်လွဲသူ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/nikoye-natsoe-20ta-20kaung.pdf>(နီကိုရဲ)
>> 149. ဇွတ် <http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/nikoye-zut.pdf>(နီကိုရဲ)
>> 150. ဇက်ပေါ်ကဆီးသီး<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/nikoye-plum-on-z.doc>(နီကိုရဲ)
>> 151. ရေပွက်ပမာ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mya-than-thintyaepwetpamar.pdf>(မြသန်းတင့်)
>> 152. ကြာညိုနံ.သင်းသောရေ၀တီမ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mya-than-tint-kyar_nyo_nant_thin_thaw.pdf>(မြသန်းတင့်)
>> 153. သြဂုတ်တစ္ဆေများနှင့်အခြားဝတ္တုတိုများ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/mya-than-tint-august-ghost.pdf>(မြသန်းတင့်)
>> 154. လွမ်းလေကညင်း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/lwan-lay-ka-nyin.pdf>(နွမ်ဂျာသိုင်း)
>> 155. တစ်မျိုးညာနွဲ. သွေမဖယ် စိုးပါနဲ.မေရယ်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/07/nwan-gyar01.pdf>(နွမ်ဂျာသိုင်း)
>> 156. ပန်းပွင့် ခရေနှင့်အခြားဝတ္တျုတိုများ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/kha-yay.pdf>(မစန္ဒာ)
>> 157. အောက်စ်ဖို.ဒ် တက္ကသိုလ် ခရီးသွားမှတ်တမ်း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/mg-va.pdf>(သိပ္ပံမောင်ဝ)
>> 158. မြတ်ဗုဒ္ဓ ဒေသနာ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/what-buddha-taught-in-myanmar.pdf>(ဒေါက်တာဝါလ်ပိုလာ)
>> 159. အမေနဲ့အမေ့အကြောင်း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/a-may.pdf>(ချစ်စံဝင်း)
>> 160. ဖူးစာရှင်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/phu_sar_shin_by_min_lu_1_.pdf>(မင်းလူ)
>> 161. အမှတ်တရ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/a_mhat_ta_ya_juu.pdf>(ဂျူး)
>> 162. ချစ်သူ၏သမီး<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/chit_thu_ei-20_thamee.pdf>
>> 163. ရေမျောသီး<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/ju_floating_fruit.pdf>
>> 164. လေထဲမှာပျံဝဲသူများ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/ju_flying_humans_in_space.pdf>
>> 165. ကမ္ဘာမြေရဲ့ချစ်သူ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/ju_nature_lover.pdf>
>> 166. အမုန်းကြောင့်ဖြစ်သောစစ်ပွဲများ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/jueamonekyaunephitthaw.pdf>
>> 167. ကြယ်စင်တံတားကမ်းပါးနှင်းဖြူ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/juekyalsintatar.pdf>
>> 168. ရာဇ၀င်ထဲမှာမောင့်ကိုထားရစ်ခဲ့<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/juu-leave-me-alone-in-history.pdf>
>> 169. လရောင်ကိုကြောက်သူ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/juu-afraid-of-moonlight.pdf>
>> 170. ချစ်ခြင်း၏အနုပညာ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/juu-art-of-love.pdf>
>> 171. မိန်းမနှစ်ယောက်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/juu-main-ma-nha-yout.pdf>
>> 172. မြရဲ့လ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/juu-mya-yae-la.pdf>
>> 173. အက်ဆစ်တစ်ခွက်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/juu-poison.pdf>
>> 174. ချစ်သူလားစကားတစ်ပွင့်ပွင့်ခဲ့တယ်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/juu-sagar-pwint-2.pdf>
>> 175. ကျွန်မနဲ့ဆေးလိပ်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/juu-smoking-and-me.pdf>
>> 176. ဆရာဝန်နှစ်ယောက်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/juu-two-doctors.pdf>
>> 177. ကြယ်ကြွေတို့ရဲ့အတောင်ပံ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/juu-wingoffallingstar.pdf>
>> 178. ကမ္ဘာမြေရဲ့ချစ်သူ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/juu-world_s-lover.pdf>
>> 179. လောကဓံနှင့်လမ်းလျှောက်အတူထွက်ခြင်း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/lawkadan.pdf>(ချစ်ဦးညို)
>> 180. ရှက်စိတ်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/luduseinwin.pdf>(လူထုစိန်ဝင်း)
>> 181. အဖြူ <http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/white.pdf>(ဂျာနယ်ကျော် မမလေး)
>> 182. အတောင်ပံတွေရှိခဲ့ရင်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/ataungpantarshikhetyin.pdf>(လွန်ထားထား)
>> 183. ရှူး <http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/shuu.pdf>(တာရာမင်းဝေ)
>> 184. ပင်လယ်နှင့်တူသောမိန်းမများ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/pinlainaithutawmeinmamyar.pdf>(ဂျူး)
>> 185. အပြင်ကလူ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/apyinkalu.pdf>(ကြည်အေး)
>> 186. နွမ်းလျအိမ်ပြန်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/nwanlyaeainpyan.pdf>(ကြည်အေး)
>> 187. ကံကိုပြင်လိုက်ပါ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/kankopyinlitepar.pdf>(ရဝေနွယ်-အင်းမ)
>> 188. အပျိုစင်တို့သိဖို့ယောင်္ကျားတို့အကြောင်း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/meinkaly.pdf>(ကံချွန်)
>> 189. သစ်ရွက်တို့၏ပေါ့ဆခြင်းများ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/leaf.pdf>(ဝေမှူးသွင်)
>> 190. စက္ကူပန်းတွေရဲ့သီချင်း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/leafflower.pdf>(ဝေမှူးသွင်)
>> 191. နဂါးနိုင်ဓါး<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/naganaingdar.pdf>
>> 192. စိုမှာစိုးလို့မိုးမိတယ်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/somarsoloke.pdf>(မင်းခိုက်စိုးစန်)
>> 193. ခေတ်သစ်တစ်ခု၏အစ၊ အဓိပ္ပါယ်များ၏အဆုံး<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/adeitpai.pdf>(မင်းခိုက်စိုးစန်)
>> 194. ချောင်းကြည့်တတ်သူတစ်ယောက်ရဲ့ည<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/chaung.pdf>(မင်းခိုက်စိုးစန်)
>> 195. ကလေးအတွေး<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/kalayatwai.pdf>(မင်းခိုက်စိုးစန်)
>> 196. သုည <http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/tokenya.pdf>(မင်းခိုက်စိုးစန်)
>> 197. နှလုံးသားမိတ္တူ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/nalonetarmeitthu.pdf>(အရှင်ဆန္ဒာဓိက)
>> 198. လူပျိုဘုရားလုံးဝမရှိ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/pyobayarlonewamashi.pdf>(အရှင်ဆန္ဒာဓိက)
>> 199. သင်နဲ့နံနက်ခင်းကိုသာဝင်ခွင့်ပြုမည်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/08/tinnintnannatkhain.pdf>(တာရာမင်းဝေ)
>> 200. မဟူရာမေတ္တာ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/naing_win_swe_mahuyar.pdf>(နိုင်ဝင်းဆွေ)
>> 201. မုန်း၍မဟူ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/journalkyawmoneywaymahu.pdf>(ဂျာနယ်ကျော်မမလေး)
>> 202. မိန်းမလှအမုန်း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/win_oo_-_main_ma_hla_a_mone.pdf>(၀င်းဦး)
>> 203. ရွှေဝါပြည်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/yangon_ba_sweshwe_wah_pyi.pdf>(ရန်ကုန်ဘဆွေ)
>> 204. ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ရဲ့ဖြစ်တည်မှု<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/pone_nya_khin.pdf>(ပုညခင်)
>> 205. အီဂျစ်ဘုရင်မာယာရှင်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/dagonshwemyaregit-queen-maryarshin.pdf>(ဒဂုန်ရွှေမျှား)
>> 206. ထောင်မင်းသားဦးဘိုးတော်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/dagonshwemyarhtaung-min-tar-uboehtaw.pdf>(ဒဂုန်ရွှေမျှား)
>> 207. ကမ္ပလာနီအောက်ဝယ်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/dagonshwemyarkabalarni-outwal.pdf>(ဒဂုန်ရွှေမျှား)
>> 208. ကျွန်မင်းသား<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/dagonshwemyarkyon-min-thar.pdf>(ဒဂုန်ရွှေမျှား)
>> 209. အစီရ၀တီ ကုဏ္ဍလကေသာ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/chitoonyoasi-ya-wady.pdf>(ချစ်ဦးညို)
>> 210. ချစ်သူမင်းနန္ဒာ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/chitoonyochit-thu-min-nandar.pdf>(ချစ်ဦးညို)
>> 211. စာမရီတို့ထူးထူးခြား<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/chitoonyosar-ma-yi-toe-htu-htu-char-char.pdf>(ချစ်ဦးညို)
>> 212. ယာဇ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/chitoonyoyar-za.pdf>(ချစ်ဦးညို)
>> 213. မလေးမဏိစန္ဒာရဲ့နှောင်း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/malay-manisandar-chit-oo-nyo.pdf>(ချစ်ဦးညို)
>> 214. စွယ်စုံလက်ဆောင်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/363.pdf>(အကြည်တော်)
>> 215. မိုးတိမ်ပုံပြင်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/360.pdf>(အကြည်တော်)
>> 216. ဘီလူး <http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/361.pdf>(အကြည်တော်)
>> 217. ဇ <http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/364.pdf>(အကြည်တော်)
>> 218. အိုင်အိုဒင်းကိုကိုကြီးနှင့်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/365.pdf>(အကြည်တော်)
>> 219. ပိုးကောင်များ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/366.pdf>(အကြည်တော်)
>> 220. တောသားကြီး <http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/370.pdf>(အကြည်တော်)
>> 221. သံသရာအကွေ့တစ်ရာ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/372.pdf>(အကြည်တော်)
>> 222. သဲလှည်း <http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/373.pdf>(အကြည်တော်)
>> 223. အိပ်မက်အပိုဒ်ခွဲ၉<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/374.pdf>(အကြည်တော်)
>> 224. ရော်ဘင်ဆင်ကရူးဆိုး<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/381.pdf>(ဒဂုန်ရွှေမျှား)
>> 225. မှ တစ်ဆင့် <http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/426.pdf>(မိုးမိုးအင်းလျား)
>> 226. ဖြူမှောင်ဝေကင်း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/428.pdf>(မိုးမိုးအင်းလျား)
>> 227. ပျောက်သောလမ်းမှာ စမ်းတ၀ါး<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/430.pdf>(မိုးမိုးအင်းလျား)
>> 228. စိန်တစ်ပွင့် <http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/431.pdf>(မိုးမိုးအင်းလျား)
>> 229. သိက္ခာရှိတဲ့ မုန့်ဟင်းခါး<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/434.pdf>(မိုးမိုးအင်းလျား)
>> 230. ဝေဒနာ ကြာနီပွင့်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/435.pdf(မိုးမိုးအင်းလျား)>> 231. လရဲ့အောက်ဘက်မိုင်အဝေးမှာ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/juu__la_yae_out_phat_mile_away.pdf(ဂျူး)>> 232. ကွက်လပ်ကလေးဖြည့်ပေးပါ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/0/ma_san_dar__kwat_lat_ka_lay_phay_pay_per_.pdf>(မစန္ဒာ)>> 233. ပန်းစကား<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/masnadar_pamsagar.pdf>(မစန္ဒာ)
>> 234. ကျောက်သင်ပုန်းတွေမိုးထားတဲ့အိမ်<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/kyaut_thin_pone_twe_moe_htar_tae_eain.pdf(အကြည်တော်)
>> 235. နတ်နေကိုင်း<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/nat_nay_kine.pdf>(အကြည်တော်)>> 236. နတ်ပြည်၏နံနက်ခင်း<http://shweone.files.wordpress.com/2008//nat_pyi_ei_na_nat_khinn.pdf>(အကြည်တော်)
>> 237. ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ လွတ်လပ်ရေးစိတ်ဓာတ်မျိုးစေ့ချခဲသူ<http://shweone.files.wordpress.com/2008/09/uotm.pdf>(ဦးဘရင်)
ရိုးရာမှသည် ခေတ်သစ်ဆီသို့(ဗဂျီအောင်စိုး )
အမုန်းကြောင့် ဖြစ်သော စစ်ပွဲများ (ဂျူး )
လူငယ် နဲ့ တာဝန်ယူစိတ် (လူထုစိန်ဝင်း)
မှော်ရုံတောမှာ မောလှပြီ (မြသန်းတင့်)
လာခြင်းကောင်းသော အရှင် (မြသန်းတင့်)
မြန်မာစာ မြန်မာမှုကို ပြူစုပြိုးထောင်ခေါင်းဆောင်ခဲ့ကြသူများ(တက္ကသိုလ် တင်ခ)
မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု နှင့် ကျင့်ဝတ် (မောင်အံ့ (မဟာဝိဇ္ဇာ-ဘုံဘေ))
ယန်းပေါဆတ် ၏ ဖြစ်တည်မှုဝါဒ (မောင်သာမည)
မြန်မာ့မဟာဂီတ (လူထုဒေါ်အမာ) စာပေ သမိုင်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အတွေးအမြင်များ (မောင်ဇေယျာ)
နိယာမ ဗဟိုပြု ခေါင်းဆောင်မှု (ခင်မောင်ညို-ဘောဂဗေဒ)
သမိုင်းစကား ပန်းစကား (မြသန်းတင့် ၊ ထက်အောင်)
ကမ္ဘာမြေကြီးသည် နတ်ဥယျာဉ်မဟုတ်(သမိုင်းစကား ပန်းစကား -၂)(မြသန်းတင့် ၊ ထက်အောင်)
ကြာညိုနံ့ သင်းသော ရေဝတီမ (မြသန်းတင့်)
သြဂုတ်တစေများ နှင့် အခြားဝတ္ထုတိုများ (မြသန်းတင့်)
တော်ဖလာ နဲ့ စကားစမြည် (ကျော်ဝင်း)
ရထား (မောင်ချောနွယ်-ကဗျာရှည်ငါးပုဒ် စုစည်းမှု)
မီးလျှံ နှင့်ရေသီတာ (မန်းတင်)
ဂျူလိယက်ဆီဆာ (မန်းတင် - မြန်မာပြန်)
စစ်အတွင်းနေ့ စဉ်မှတ်တမ်း (သိပ္ပံမောင်ဝ)
အောက်စ်ဖို့ ဒ်တက္ကသိုလ် ခရီးသွားမှတ်တမ်း (သိပ္ပံမောင်ဝ)
၃၇ မင်း - ဦးဖိုးကျား
ရတနာပုံ မှ ရတနာဂီရိ သို့ (တော်ဘုရားလေး - အောင်ဇေ)
ပင်လယ်ကျား နှင့် အဏ္ဏဝါ မီးစုန်းများ (ဖိုးကျော့)
ဆင်သချိုင်း ရှာပုံတော် နှင့် အခြားဝတ္ထုတိုများ (ဖိုးကျော့)
ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းခေတ် အိုင်ဒီယာ စီးပွားရေး (မောင်စူးစမ်း)
ဘောဂဗေဒ နှင့် ဂျာနယ်လစ်ဇင် ဗလုံးဗထွေး (မောင်စူးစမ်း)
စီးပွားရေး အတွေးအမြင် (မောင်စူးစမ်း)
ပန်းတပွင့် ရဲ့ ရင်ခုန်သံ (ဝင်းဝင်းမြင့် - နန်းတော်ရှေ့)
ဖြစ်တည်ခြင်း ပဓာနဝါဒ နှင့် လူသားပဓာန ဝါဒ (ယန်းပေါဆတ်- ဆန်းလွင် jမန်မာပြန်သည်)
ကိုင်း ပြောလိုက်စမ်းမယ် သောင်းပြောင်းထွေလာ (ခင်မျိုးချစ်)
ပစပ် ရာဇဝင် (မှော်ပီ ဆရာသိန်း)
ယောမင်းကြီး ဦးဘိုးလှိုင်အတ္ထုပတ္တိ နှင့် ရာဇ ဓမ္မသင်္ဂဟ ကျမ်း (မောင် ထင်)
ဥာဏ်ပညာ ထက်မြက်သူတို.လက်စွဲ ချစ်နိုင် (စိတ်ပညာ) အနှစ်၃၀ ချစ်နိုင် (စိတ်ပညာ) သိပ္ပံမှသည် သစ္စာဆီသို. (ချစ်ငယ်) မဟာသေနာပတိ (ချစ်ဦးညို) လင်္ကာဒီပချစ်သူ (ချစ်ဦးညို) တွေးသူများ (ကိုတာ) ငယ်ကချစ်အနှစ်တစ်ရာ (ဒဂုန်ရွှေမျှား) စောရသက်ပြင်း (ဒဂုန်ရွှေမျှား) ညမဖတ်ရ (သို.မဟုတ်) သွေးစုပ်ရောဂါ (ဒဂုန်ရွှေမျှား) စိတ်ပြောင်းကိုခွာ (ဒဂုန်ရွှေမျှား) ထမင်းလုံး တစ္ဆေ (ဒဂုန်ရွှေမျှား) ဂြိုလ်မွေတဲ့ပန်းတဂေါင်း (ဒဂုန်ရွှေမျှား) ၀ိညာဉ်၏ အရိပ် (ဒဂုန်ရွှေမျှား) သင်္ဘောပျက် ခရီးသည် ခုနှစ်ယောက် (ဒဂုန်ရွှေမျှား) လက်မတင်ကလေး (ဒဂုန်ရွှေမျှား) သူယောင်ရုပ် (ဒဂုန်ရွှေမျှား) ကမ္ဘာကို ကိုင်လှုပ်သူ (ဒဂုန်ရွှေမျှား) ငယ်ကချစ် အနှစ်တစ်ရာ (ဒဂုန်ရွှေမျှား) ရှက်ပြုံး (ချစ်စံဝင်း) မျက်ရည်စများနှင့်ရယ်သံ (ကျော်လှိုင်ဦး) ရဲဘော်သုံးကျိပ် (ကျော်ငြိမ်း) တော်ဖလာနှင့်စကားစမြည် (ကျော်ဝင်း) တော (လင်းဝေမြိုင်) မာန၏နောက်ဆွဲတွဲများ (လွန်ထားထား) စာဖတ်ကျွမ်းခြင်းဖြင့် ဘ၀တိုးတက်ရေး ၁ (ဇင်သန်.) စာဖတ်ကျွမ်းခြင်းဖြင့် ဘ၀တိုးတက်ရေး ၂ (ဇင်သန်.) စာဖတ်ကျွမ်းခြင်းဖြင့် ဘ၀တိုးတက်ရေး ၃ (ဇင်သန်.) ဆင်းရဲသောဖေဖေ ချမ်းသာသောဖေဖေ (ညီသစ်) သူတို.အမြင်သူတို.အတွေး (ပါရဂူ) ကလေးပြဿနာ (ပါရဂူ) သူ.လိုဘုရင် (ပါရဂူ) လူသုံးကုန်ပစ္စည်းရောင်းသူများ (ဖေမြင့်) သေရွာပြန်တို.၏အဏ္ဏ၀ါခရီး (ဖိုးကျော.) ဆင်သင်္ချိုင်းရှာပုံတော်နှင့်အခြားဝတ္တုတိုများ (ဖိုးကျော.) ပင်လယ်ကျား၊အဏ္ဏ၀ါမီးစုန်းများနှင့်အခြားဝတ္တုတိုများ (ဖိုးကျော.) ညီမလေးရယ်စိုးရိမ်မိတယ် (တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင်) တန်းခူးလေနှင့်လျော့တော့သည် (တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင်) ၀သန်လေချိန်မှန်ကူး (တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင်) ခေါင်းနှင့်ပန်း (ဖိုးဝမောင်) အေးချမ်းစေသော စကားလုံးလေးများ (ဖိုးဝမောင်) ဖြစ်တည်ခြင်း ပဓါန၀ါဒနှင့် လူသားပဓါန၀ါဒ (ဆန်းလွင်) ကမ္ဘာ.တွေးခေါ်ပညာရှင်ကြီးများ (ဆန်းလွင်) အချစ် လက္ခဏာ (စံ-ဇာဏီဘို) အချစ် ဗေဒင် (စံ-ဇာဏီဘို) မီးပြတိုက် (ဆောင်းဝင်းလတ်) နံနက် ၃နာရီ (ဆောင်းဝင်းလတ်) ဆူးကလေးစူးတယ် ခူးမယ် (ဆောင်းဝင်းလတ်) အမှတ်တရရွှေ ၆၀ (၀င်းငြိမ်း) အဖော် (ရှား) တသက်တာမှတ်တမ်းနှင့်အတွေးခေါ်များ (ရွှေဥဒေါင်း) မြတ်သက်မော် (ရွှေဥဒေါင်း) ခေါင်းတုံးပေါ်ထိပ်ကွက်(ရွှေဥဒေါင်း) ရတနာပုံ (ရွှေဥဒေါင်း) ခရီးထွက်ရန်စီစဉ်ကြခြင်း (ရွှေဥဒေါင်း) အနားသတ်သစ္စာ (စိုးမြတ်သူဇာ) ဘ၀တစ်ခုအမှတ်တရ (ဆွေမင်း၊ ဓနုဖြူ) လူညာကြီး (ဆွေဆွေအောင်) လွယ်အိပ်ကလေး (ဆွေဆွေအောင်) အရှေ.မြို.ရိုးမှ မိုးရေစက်များ (တာရာမင်းဝေ) မှော်ဆရာရဲ.ကျောင်းစာအုပ် (တာရာမင်းဝေ) ကောင်းကင်အကြွေကောက်တဲ့လက် (တာရာမင်းဝေ) ရွှေဖိနပ်မှာအစိမ်းရောင် (တာရာမင်းဝေ) ကိုယ့်လက်နဲ. ဖမ်းမိတဲ့နဂါးငွေ.တန်း (တာရာမင်းဝေ) ကိုးမရှိတဲ့ န၀င်း(တာရာမင်းဝေ) အထဲသို.၀င်လော့ ဘာကြောင့်ရပ်နေသနည်း (တာရာမင်းဝေ) ကျွန်တော်နှင့်ကြယ်မြင်လမြင်လောကဓံ (တာရာမင်းဝေ) ပြိုင်မြင်းတို.ရဲ့ခွာသံ (တာရာမင်းဝေ) ကျွန်တော်နှင့်ဧဒင်ကချေသည် (တာရာမင်းဝေ) ကျွန်တော်နှင့်ကြေးသွန်းယဉ်ကျေးမှု (တာရာမင်းဝေ) လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ ကျောက်ထွင်းရာဇ၀င်(တာရာမင်းဝေ) ချစ်သုံးလီ (သန်းဆွေ) ကျွန်တော့်ဘ၀အကြောင်း (သော်တာဆွေ) ဘရန်ဒီတစ်ပုလင်း (သော်တာဆွေ) ကျောက်ဖြုံးကျော်ကြီး (သော်တာဆွေ) အရှေ.ကနေ၀န်းထွက်သည့်ပမာ (သိန်းဖေမြင့်) မျိုးရိုးထဲမှ ဆိုးပေကြီးများ (သုမောင်) အစွမ်းထက်ဂါထာတော်များနှင့်ဂမ္ဘီရဖြစ်ရပ်ဆန်းများ (သုသုက) သုခ မှတ်စု ငလျင်ဗုံးကြဲခဲ့စဉ်ကနှင့်အခြားဝတ္တုတိုများ (ဦးလှဝင်း) ရွှေဘုံသာ လမ်းပေါ်မှာ (ဦးလှဝင်း) အာဇာနည် (ဦးနု) တာတေ စနေသား (ဦးနု) ဘ၀အကျဉ်းသား (ဦးရွှေအောင်) ၁၉၈၈-၂၀၀၂ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ထူးခြားမှုရက်စွဲမှတ်တမ်းများ HIV မှတ်စုများ ၂၀၀၄ (ဒေါက်တာသီဟ) ငါပြောချင်သမျှငါ့ကြောင်း (ဒေါက်တာသန်းထွန်း) ကဗျာများ (ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း) ***** ယောနသံ ဇင်ယော် (ဦးဘသန်း) မှတ်မိသမျှ ကိုအောင်ဆန်း၏ကျောင်းသားဘ၀ ကိုဒေါင်း (မောင်ထင်) ရေဘုရင်မြေပြင်မှာတော့ (ကြည်သာ) သွေး (ဂျာနယ်ကျော် မမလေး) *** ဂျုလိယက်ဆီဆာ (မန်းတင်) ရှေးဘ၀ နောက်ဘ၀ ဗုဒ္ဓ မဝေဖန် နှင့် ဓမ္မစာစုများ (၀င်းသိန်းဦး) ငှက်တွေ ဆောင်းမခိုမီ (ငြိမ်းအေးအိမ်) မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ (၁) အပိုင်း က (ဦးနု) မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ (၁) အပိုင်း ခ (ဦးနု) အဟိတ်- - - ၀တ္တုဇာတ်လမ်းများ (သိပ္ပံမောင်ဝ) ရတနာ လိုဏ်ဂူ (နတ်နွယ်) အတွေးအမြင်စာစဉ် ပန်းတစ်ပွင့်ရဲ. ရင်ခုံသံ (၀င်းဝင်းမြင့်) ဗေဒါလမ်း (ဇော်ဂျီ) ဝေေ၀ရီရီ ၀တ္တု (ဇော်ဇော်အောင်) မြိုင် (ဒဂုန်တာရာ) စက်ဝိုင်း (မစန္ဒာ) ငယ်သူမို.မသိပါ (မစန္ဒာ) ငြိုးမာန်ဖွဲ့သူရယ် (မစန္ဒာ) ဂျီဟောသူ (မစန္ဒာ) အရိပ် (မစန္ဒာ) ၀တ္တုတိုများ ၆ (မစန္ဒာ) ပုစ္ဆာ (မစန္ဒာ) မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ကျင့်ဝတ် (မောင်အံ့) ပစပ်ရာဇ၀င် (မှော်ပီဆရာသိန်းကြီး) ကိုဒေါင်း (မောင်ထင်) မြန်မာ၁၂လအကြောင်း (မောင်ထင်) ဟာသများလက်ရွေးစင် (မောင်ကောင်းထိုက်) ဟာသများလက်ရွေးစင် ၂ (မောင်ကောင်းထိုက်) ဟာသများလက်ရွေးစင် ၁၄ (မောင်ကောင်းထိုက်) သေပြေးရှင်ပြေး (မောင်ပေါ်ထွန်း) ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းခေတ် အိုင်ဒီယာစီးပွားရေး (မောင်စူးစမ်း) ထူးအတွေ.ကြုံအဆန်း တစ္ဆေဇာတ်လမ်းများ (ဒေါက်တာအောင်ကျော်) တွေ.ရကြုံရ ရှတတလေးတွေ (အီကြာကွေး) မီးရောင်အောက်ကိုဝင်လျှင် (မိုးမိုး အင်းလျား) ဖြတ်သန်းသွားလာခွင့်မရှိ (မိုးနီလွင်) ပေတလူ (မင်းသိင်္ခ) ၀တ္တုတိုပေါင်းချုပ် (မင်းသိင်္ခ) ဆားလင်းနှင်းမောင်နှင့် ဘမျိုးဘိုးတူ ဘယ်သန်ဘမှန် ပထမပိုင်း (မင်းသိင်္ခ) ဆားလင်းနှင်းမောင်နှင့် ဘမျိုးဘိုးတူ ဘယ်သန်ဘမှန် ဇာတ်သိမ်း (မင်းသိင်္ခ) မ� တတ်ပါ့� (မင်းသိင်္ခ) မအောင်ရင် (မင်းသိင်္ခ) မနောမယကိုပီတာ (မင်းသိင်္ခ) ဖရန်.(ဇ)ကာ(ဖ)ကာ၏ စာ (မြင့်သန်း) ပြောရင်းပြောနေမည့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ (နန္ဒာသိန်းဇံ) အိုင်ဒီယာ အက်ဆေးများ (နေ၀င်းမြင့်) နှလုံးသားထဲကြွက်ဝင်နေသည် (နီကိုရဲ) ကျွန်တော်နှင့်လက်တွဲဖေါ်များ (နီကိုရဲ) ကျွန်တော်နှင့်ဈေးသည်အလွဲများ (နီကိုရဲ) တစ်သုံးခုနှစ်ရှစ် (နီကိုရဲ) လှည့်စား (နီကိုရဲ) သံစုံကြူးတဲ့ည (နီကိုရဲ) လွယ်အိတ်ထဲကအလွဲများ (နီကိုရဲ) နတ်ဆိုးတစ်ကောင်နဲ.ရင်လွဲသူ (နီကိုရဲ) ဇွတ် (နီကိုရဲ) ဇက်ပေါ်ကဆီးသီး (နီကိုရဲ) ရေပွက်ပမာ (မြသန်းတင့်) ကြာညိုနံ.သင်းသောရေ၀တီမ (မြသန်းတင့်) သြဂုတ်တစ္ဆေများနှင့်အခြားဝတ္တုတိုများ (မြသန်းတင့်) လွမ်းလေကညင်း (နွမ်ဂျာသိုင်း) တစ်မျိုးညာနွဲ. သွေမဖယ် စိုးပါနဲ.မေရယ် (နွမ်ဂျာသိုင်း) ပန်းပွင့် ခရေနှင့်အခြားဝတ္တျုတိုများ (မစန္ဒာ) အောက်စ်ဖို.ဒ် တက္ကသိုလ် ခရီးသွားမှတ်တမ်း (သိပ္ပံမောင်ဝ) မြတ်ဗုဒ္ဓ ဒေသနာ (ဒေါက်တာဝါလ်ပိုလာ) အမေနဲ့အမေ့အကြောင်း (ချစ်စံဝင်း) ဖူးစာရှင် (မင်းလူ) အမှတ်တရ (ဂျူး) ချစ်သူ၏သမီး(ဂျူး) ရေမျောသီး(ဂျူး) လေထဲမှာပျံဝဲသူများ(ဂျူး) ကမ္ဘာမြေရဲ့ချစ်သူ(ဂျူး) အမုန်းကြောင့်ဖြစ်သောစစ်ပွဲများ(ဂျူး)
ချစ်ဦးညို - အီဂျစ်နဲ့အ
အသည်းကွဲ ၂၄ နာရီ(အကြည်တော်)
အိမ်မက်အပိုဒ်ခွဲ ၉ (အကြည်တော်)
Dhamma Dhuta Dr Ashin Pannissara _ How to Practice Meditation <
E-Books (English) [image:PDF] <
Bhikkhu Pesala _ The Debate of King Milinda <
Dr Mehm Tin Mon _ Kamma, The Real Creator <
Dr Mehm Tin Mon _ The Right View on Life, Living and Dying <
Ledi Sayadaw _ The Manual of Buddhism <http://www.mediafire.com/?mntojmzyige
Mogok Sayadaw _ Basic Paticcasamuppada <
Mogok Sayadaw _ How To Die With A Smile <
Mogok Sayadaw _ Meditation on Mind and Feeling <
Mogok Sayadaw _ The Four Noble Truths <http://www.mediafire.com/?jiz02mgkkzu
Richard Walton _ Advanced English C.A.E <
U Dhammapiya _ Nibbana in Theravada Perspective <
U Than Daing _ Cittanupassana and Vedananupassana <
Anandajoti Bhikkhu, ABHIDHAMMA-MATIKA, 2007 <
Bertrand Russell, ABC of Relativity, London <
Bertrand Russell, The History of Western Philosophy, N.Y, 1954 <
Bertrand Russell, The Problems of Philosophy<
Bertrand Russell, Why I Am Not A Christian , 1927 <
Dr Walpola Rahula, WHAT THE BUDDHA TAUGHT<
Edward Judson , The Life of Adoniram Judson , Anson D.F. Randolf & ,
New York , 1883 <http://www.mediafire.com/?oyjjmg0hymc>
Harun Yahya, ISLAM and BUDDHISM , NEW DELHI, 2003<
P.V.BAPAT, VIMUTTIMAGGA and VISUDDHIMAGGA-a comparative study, POONA,1937<
Sri Arthur Eggar , The Law of Evidence , Varsity Book Club , Burma , 1950 <
A Pali Word A Day <<a href="http://www.mediafire.com/?gwncmnzn1nd
ကိုစံ _ ခန္ဓာငါးပါးပျောက်ဆုံးခြင်းတရား <http://www.mediafire.com/?mwo0dtnkllq
ကိုတာ + _ လူငယ်တို့ရဲ့ အနာဂါတ်စကားဝိုင်း <
ကျီးသဲလေးထပ်ဆရာတော် _ စွယ်စုံကျော်ထင်ကျမ်း <
ခင်မောင်အေး _ ရောင်စုံရုပ်ပြပဋ္ဌာန်း၂၄ပစ္စည်းနှင့်ရှင်ချက်များ<
ချစ်စိန်လွင် _ ဆောင်ကြာမြိုင်မှတ်တမ်း <http://www.mediafire.com/?t0tymunnxiy
ချစ်ဦးညို _ ရုက္ခစိုးမယားနဲ့အခြားပြိတ္တာများ <
စိန်စိန် _ ရွှေရောင်ညနှင့်အခြားဝတ္ထုတိုများ <
ဆန်းလွင် _ ကမ္ဘာ့တွေးခေါ်ရှင်ကြီးများ , ၀င်းလိုက်ပုံနှိပ်တိုက် , ရန်ကုန် ,၁၉၉၉
ဆန်းလွင် _ ဖြစ်တည်ခြင်းပဓါန၀ါဒ နှင့်လူသားပဓါန၀ါဒ <
ဆန်းလွင် _ ရတနာသုံးပါးကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်လူသူ တစ်ယောက်အကြောင်း<
ဇ၀န _ ဆိုးပေ ၁ , မယာမီဒီယာပုံနှိပ်တိုက် , ရန်ကုန် , ၂၀၀၀ မေလ <
ဇေယျ _ ဇေယျ စာတန်း , ညွှန့်ဋ္ဌေးစာပေတိုက် , ရန်ကုန် , ၁၉၆၅ <
ဇော်ဂျီ _ ညီသစ်ဆင်းကဗျာစု , အင်ကြင်းဦးပုံနှိပ်တိုက် , ရန်ကုန် , ၂၀၀၃ ဧပြီ <
ညာဏ၀ံသ _ ဂဗ္ဒလီလာကြဏ်း , ဟံသာဝတီသတင်းစာတိုက် , ရန်ကုန် ,၁၈၉၉ <
တိုးထက် _ မြန်မာပြည်အရပ်ရပ်မှလူဝင်စားများ <
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် _ ညီမလေးရယ်စိုးရိမ်မိတယ် <
တင်မောင် _ တိုင်းပြည်ကနုနု မုန်တိုင်းက ထန်ထန် <
ထူးဆွေအောင် _ မန်ကျည်းပင်တန်းရဲ့မီဒီယာ <
ထူးဆွေအောင် _ မြင်းမိုရ်တောင်ထိပ်မှသဲပွင့်ကလေးများ <
ဒဂုန်ရွှေမျှား _ငယ်ကချစ်အနှစ်တစ်ရာနှင့်လက်ရွေးစင်ဝတ္ထုများ <
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် _ ကြောက်ရွံ့ခြင်းမှ လွတ်ကင်းရေး <
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် _ မြန်မာပြည်ကလာတဲ့စာ <
ဒေါက်တာဘမော် _ ဗမာ့လက်ငင်း-လွတ်လပ်ရေး <http://www.mediafire.com/?hjgnzy5naiq
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် _ တော်ကူးဆရာတော် ဘ၀ဆည်းဆာနှင့် ကျင့်စဉ်တရား <
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် _ ဗုဒ္ဓဘာသာစာရိတ္တပညာနှင့်ကျင့်ဝတ်များ <
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် _ ဗုဒ္ဓ၀ါဒနှင့်ခေတ်သစ်ဘ၀ <
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် _ ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာအနှစ်ချုပ် <
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် _ ဘ၀ကိစ္စနှင့်ဘ၀ပန်းတိုင် <
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် _ ဘ၀ဖန်တီးရှင် ကံတရား <
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် _ ဘ၀ရည်မှန်းချက်နှင့်ဘ၀ပန်းတိုင် <
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် _ ဘ၀လွတ်မြောက်ရေးနှင့်အရိယသစ္စာ <
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် _ ဘ၀အောင်မြင်ရေးသို့ရှေးရှုကြ <
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် _ ရှေးဘ၀နောက်ဘ၀ သိပ္ပံနည်းကျအထောက်အထားများ <
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် _ အကောင်းဆုံးဘ၀လမ်းညွှန်မှု <
ဒေါက်တာမင်းတင်မွန် _ အမြတ်ဆုံးပန်းတိုင်ဧကန်ပိုင် ဒုတိယတွဲ <
ဒေါက်တာအရှင်ပညိဿရ _ လိုအင်ဆန္ဒတွေပြည့်ပါစေ <
နီကိုရဲ _ ကျွန်တော်နှင့်ဈေးသည်အလွဲများ <
နိုင်ပန်းလှ _ ရာဇဓိရာဇ်အရေးတော်ပုံကျမ်း <
ပုညခင် _ ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ဖြစ်တည်မှု <http://www.mediafire.com/?nmlin4jnyj2
ဖေမြင့် _ ဘေဘီလုံမှာအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ် <
ဖျာပုံတိုက်သစ်ဆရာတော် _ သုတေသနသရုပ်ပြအဘိဓာန် ၂၀၀၇ <
ဗားကရာဆရာတော် _ အဘိဓမ္မတ္ထသင်္ဂဟ ပါဌ်နိဿယ <http://www.mediafire.com/?mmntyxjz4mm
ဘလော်ဂါနှင့် ကဗျာဆရာ/မများ _ ကောင်းကင်များ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ<
ဘဒ္ဒန္တကိတ္တိသာရ _ ဗုဒ္ဓညွှန်ကြား မသေဆေးတရား <
ဘဒ္ဒန္တဇာဂရာဘိဝံသ _ နာဂလိုဏ်ဂူ အဓိဋ္ဌာန်ကျင့်စဉ်နှင့် လယ်တီဝိပဿနာ <
ဘဒ္ဒန္တဇာဂရာဘိဝံသ _ လယ်တီဝိပဿနာ အမှတ် ၃ <http://www.mediafire.com/?nmwjyztknqh
ဘဒ္ဒန္တဇာဂရာဘိဝံသ _ လယ်တီဝိပဿနာ အမှတ် ၄ <http://www.mediafire.com/?wmwzyum4nl2
ဘဒ္ဒန္တဇာဂရာဘိဝံသ _ လယ်တီဝိပဿနာ အမှတ် ၅ <http://www.mediafire.com/?u3yj4ziyjfr
မ၀င်းမြင့် _ ရေပြာအိုင်မှဇာတ်လမ်းများ <http://www.mediafire.com/?ezmwmzinujg
မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော် _ ကဗျာ့နန်းတော် <http://www.mediafire.com/?gjerznjjnto
မေငြိမ်း _ သတင်းသမားသတိထားစရာ မြန်မာစာနှင့်စကားသံများ <
မိုးကုတ်ဆရာတော် _ သုညတ တရား ကြိုးစားပြီး ဟောရစ်ပါကွာတဲ့ <
မိုးကုတ်ဆရာတော် _ဇော၇ကြိမ်အကျိုးပေးပုံ.ကပ်ကျော်တရားတော် <
မိုးကုတ်ဆရာတော် _ စူဠဝေဒလ္လသုတ်-၀ိသာခနှင့်ဓမ္မဒိန္နာအမေးအဖြေများ<
မင်းမြတ်သူရ _ ဆားပုလင်းမင်းအောင်နှင့်ပန်းကိုးပွင့်ဒေ၀ီ <
မင်းလူ _ ချစ်မြားရှင်အစ ချစ်မြားရှင်အဆုံး <
မင်းသိင်္ခ _ ဆားပုလင်းနှင်းမောင်နှင့် ပျားစွဲသောမုတ်ဆိတ်<
မင်းသိင်္ခ _ ဆားပုလင်းနှင်းမောင်နှင့်မြိုင်မဟာမမြလေး <
မင်းသိင်္ခ _ ဖြစ်ချင်တာဖြစ်မောင်ဘချစ် ၁ <http://www.mediafire.com/?jrwmtjojeji
မင်းသိင်္ခ _ ဖြစ်ချင်တာဖြစ်မောင်ဘချစ် ၂ <http://www.mediafire.com/?d2nh3ynloym
မောင်ထင် _ ယောမင်းကြီးဦးဖိုးလှိုင်နဲ့ ရာဇဓမ္မသင်္ဂဟကျမ်း <
မောင်ဗိုလ်မွှေး _ မြန်မာ့ပုံတိုပတ်စများ <
မျိုးသူရ _ နေ့စဉ်သုံးအင်တာနက်. Everyday Internet <
မြသန်းတင့် _ နှစ် ၁၀၀ ကမ္ဘာ့စုံထောက်ဝတ္ထုတိုများ၂ <
မြန်န်မာသမားတော်ကြီးများ _ နှစ်ပေါင်း၂၀၀ မြန်မာ့ဆေးပညာ ,
သုဓမ္မာပုံနှိပ်တိုက်, ရန်ကုန် , ၂၈.၈.၁၉၇၁ <
ရဲကောင်းထက် _ ကမ္ဘာကို ကိုင်လှုပ်သူများ <http://www.mediafire.com/?4jimx1dklnm
ရွှေဥဒေါင်း + ၅ _ စာရေးဆရာတို့၏ ပထမဆုံးလက်ရာမွန်များ<
လှပိုင် _ မဟာသကျသီဟဘုရားသမိုင်း , ၆.၂.၁၉၆၄ <
လယ်တီဆရာတော် _ နိုင်ငံခြားပုစ္ဆာ အဖြေပေါင်းချုပ် <
လယ်တီဆရာတော် _ လယ်တီဒီပနီပေါင်းချုပ် မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် ၃ ကျမ်းတွဲ<
လယ်တီဆရာတော် _ လယ်တီနိဗ္ဗာန်တရားတော်များ <
လယ်တီဆရာတော် _ အဘိဓမ္မာပရမတ္ထသံခိပ်ကျမ်း သံပေါက်လင်္ကာ <
ဝေယံလင်းခေါင် _ သူတော်ငတေ၏ဂမ္ဘီရ၀တ္ထုတိုများ <
၀င်းတင့်ထွန်း _ ခြောက်တိုက်မှာ
လောက်ကိုက်တာခံဖူးသလား နှင့်အခြားထောင်ဝတ္တုတိုများ <
၀င်းသိန်းဦး _ ရှေ့ဘ၀နောက်ဘ၀ဗုဒ္ဓမဝေဖန်နှင့်..<
သပြေကန်ဆရာတော် _ ဗောဇ္ဈင်ခုနှစ်ပါးတရားမြတ်ရတနာ <
သပြေကန်ဆရာတော် _ နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ တရားတော်များ <
သပြေကန်ဆရာတော် _ သပြေကန်တရားပေါင်းချုပ် အမှတ် ၁ <
သပြေကန်ဆရာတော် _ သပြေကန်တရားပေါင်းချုပ် အမှတ်၂ <
သာ.ထွန်း.ပြန့် _ ဗုဒ္ဓဘာသာကောင်းတစ်ယောက် <
သာဓိန _ ဗေဒနီတိကျမ်း , မဟိန္ဒစာပုံနှိပ်တိုက် , ၁၉၃၀ <
သုမောင် _ မျိုးရိုးထဲမှ ဆိုးပေကြီးများ , ရန်ကုန် <
သုသုက _ အစွမ်းထက်ဂါထာတော်များနှင့်ဂမ္ဘီရဖြစ်ရပ်ဆန်းများ <
သင်္ဃဇာဆရာတော် _ ဥပါသကောဝါဒဋီကာကျမ်း , မြန်မာသံတော်ဆင့်ပုံနှိပ်တိုက် ,
ရန်ကုန်,၁၂၄၂ ပဌမ၀ါဆိုလ <http://www.mediafire.com/?nmzizwd1xl0>
သန်းမြင့်ဦး _ အချစ်ဘ၀နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာနည်းဗျူဟာများ <
သိပ္ပံမောင်ဝ _ စစ်အတွင်းနေ့စဉ်မှတ်တမ်း <http://www.mediafire.com/?5oynmj0ddfz
သိပ္ပံမောင်ဝ _ အဟိတ်..၀တ္ထုဇာတ်လမ်းများ <http://www.mediafire.com/?boz47c5mni1
သိပ္ပံမောင်ဝ _ အောက်စဖို့တက္ကသိုလ် ခရီးသွားမှတ်တမ်း <
အကြည်တော် _ အိုင်အိုဒင်းကိုကိုကြီးနှင့်..<
အရှင်ဃောသိတ _ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ တစ်ဘ၀သာသနာ <
အရှင်ဇနက-တိသရဏ၀ိဟာရ _ ဗုဒ္ဓဟောမြွက်တရားဦးဓမ္မစက် <
အရှင်ဇနကာဘိဝံသ _ ဓမ္မစကြာတရားတော်နှင့်အနတ္တလက္ခဏသုတ်တရားတော် <
အရှင်ဇနကာဘိဝံသ _ သိပ္ပံအမြင်နှင့် ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာအမေးအဖြေများ <
အရှင်ဆန္ဒာဓိက _ လောက၌အကောင်းဆုံးသောအရာ <http://www.mediafire.com/?gl2nqkjyjee
အရှင်ဆန္ဒာဓိက _ သက်သတ်လွတ်နှင့်ကုသိုလ်စိတ် <
အရှင်ဆန္ဒာဓိက _ အချစ်ကံခေပေမဲ့အနှစ်ကျန်စေရမယ် <
အရှင်ရဋ္ဌသာရ _ ဂမ္ဘီသာရပျို့ စာကိုယ် , မြန်မာ့ယူနီယန်စာပုံနှိပ်တိုက် , ရန်ကုန်,
၁၂၈၉ ခုနှစ် <http://www.mediafire.com/?mm0njgzzmym>
အရှင်ဝါသေဋ္ဌာဘိဝံသ _ ဓမ္မချမ်းသာတွေ့အောင်ရှာ <
အရှင်သီဟာဘိဝံသ _ မေတ္တာဘာဝနာရှုဖွယ်ကျမ်း ,
အီကြာကွေး _ ငုတ်တုတ်ထင်ရှားရေးဖော်များ <
အေးသိန်း _ ရတနာဂီရိ မှ သီပေါမင်းအမှတ်တရ <
အောင်သင်း _ ရွှင်ရွှင်ပြုံးပြုံးစာစီကုံး <
အောင်သင်း _ သေကိန်းဆိုက်တဲ့ညနှင့်အခြားဝတ္ထုတိုများ <
အုတ်ဘိုဆရာတော် _ စွယ်တော်သျှောင်ရတု , ဟံသာဝတီသတင်းစာပုံနှိပ်တိုက်
ဦးကံညွှန့် _ နိဗ္ဗာန်ပို့မည့်တရားတော်များ<
ဦးကံညွှန့် _ မိုးကုတ်ဝိပဿနာ အခြေခံ၊တရား၊အနှစ်သာရနှင့်ရှုပွါးနည်း <
ဦးကျော်ဇေယျ _ မြန်မာနိုင်ငံ မူပိုင်ခွင့်အက်ဥပဒေ <
ဦးကျော်ရန် _ မူလ=ဆေးအဘိဓါန်ကျမ်း<http://http//www.mediafire.com/?m4rhwctzczg<http://http/www.mediafire.com/?m4rhwctzczg>
ဦးကျော်လှ _ သံချိုညွှန့်ပေါင်းနှင့် ခဲရာခဲဆစ်အဖြေသစ်<
ဦးကျော်သိန်း _ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ထေရုပ္ပတ္တိနှင့်ကျင့်စဉ်<
ဦးစိုးလွင် _ အစ္စလာမ့်အတိတ်သမိုင်းမှ အယူဝါဒဆိုင်ရာအရှုပ်အထွေးများ <
ဦးစန်းမောင် _ ရခိုင်မင်းသား , သံတော်ဆင့် ,၁၉၄၆ <
ဦးဇနိတာလင်္ကာရ _ ပဋိစ္စသမုပါဒ်စက်ဝိုင်းဒေသနာ အမေးနှင့်အဖြေအကျဉ်းချုပ် <
ဦးဌေးလှိုင် _ ရဟန္တာနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ထူးများ <
ဦးထွန်းကြည် _ ကောင်းမှုတော်ဘုရားသမိုင်း <
ဦးထွန်းလှ _ ရွေးချယ်ရမည့်မိန်းမကောင်း. ရှာဖွေရမည့်ဇနီးလောင်း <
ဦးဖိုးကျား _ သီပေါမင်းပါတော်မူအရေးတော်ပုံ <
ဦးမောင်ကြီး _ ရေငံပိုင်ဦးရှင်ကြီးနတ်ဖြစ်ပြဇာတ်သစ် ပထမတွဲ<
ဦးမောင်မောင်သန်း _ ၂၁ ရာစုအင်္ဂ၀ိဇ္ဖာဆောင်းပါးများ <
ဦးရ၀ိန် _ ဥဒကဒီပနီ , မြန်မာသံတော်ဆင့်မီးစက်ကြီး ပှံနှိပ်တိုက် ,
ရန်ကုန်မြို. , ၁၂၄၈ ခု , ကဆုန်လ <http://www.mediafire.com/?2cumdajut2z>
ဦးရေ၀တ _ သာသနာ့အမွေကိုခံယူခြင်းနှင့်ငါလုပ်ချင်တာ <
ဦးရွှေအောင် _ ဗုဒ္ဓ သို့မဟုတ် အနှိုင်းမဲ့ <
ဦးရွှေအောင် _ အမြင်များပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အတွေးအမြင်စာစုများ<
ဦးသက်ထွန်း _ အနောက်တိုင်းမှ နုတ်သီးကောင်းလျှာပါးတို့၏အဆိုများ <
ဦးသိန်းဟန် _ ပြည်ထောင်စုသမိုင်းပုံပြင်များ , စာပေဗိမာန်
ပုံနှိပ်တိုက်,ရန်ကုန် , ၁၉၆၈ မတ်လ <http://www.mediafire.com/?hnl0goygmkh>
ဦးအောင်ခင် _ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ဘယ်သူသတ်သလဲ<
credit to tay tay <tayzartay@yahoo.com> and http://burmaboy.googlepages.com/nrefrmpmtkyfrsm%3B